लक्ष्य रीडर ड्रा टुक्रामा छ
जब तपाइँ अखबारहरूको विचार गर्नुहुन्छ, तपाइँ शायद हार्ड-समाचार कथाहरूमा फोकस गर्न मनपर्छ जुन अगाडिको पेज भर्नुहोला। तर कुनै पनि अखबारमा पाइने धेरै लेखहरू धेरै सुविधा-आधारित तरीकामा गरिन्छ। हार्ड खबरहरूको नेतृत्वको रूपमा, फिचर कथाहरूको लागि लिखित रूपमा लेखिएको एक फरक दृष्टिकोण चाहिन्छ।
फीचर लेडिज बनाएको हार्ड-न्यूड लेड्स
कडा समाचारले कथाको सबै महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरू पाउँदछ - कुन, कुन, कहां, कहिले, कसरी र कसरी - पहिलो वाक्य वा दुईमा, त्यसैले पाठक मात्र आधारभूत तथ्यहरू चाहनुहुन्छ भने, उनी ती छिटो ।
एक समाचार कथा को अधिक पढ्न को लागी पढ्न को बारे मा अधिक जानकारी।
फीचरले नेतृत्व गर्यो, कहिलेकाहीँ ढिलाइ भनिन्छ, कथा वा एन्कोड्लो लेड , अझ ढिलो हुन्छ। उनीहरूलाई लेखकले अझ बढी परम्परागत, कहिलेकाहीं इतिहासको तरिकामा एक कथा बताउन अनुमति दिन्छ। उद्देश्य पाठकलाई कथामा आकर्षित गर्न, तिनीहरूलाई थप पढ्न चाहानुहुन्छ।
दृश्य दृश्य गर्दै, चित्र चित्रण गर्दै
फीचरले प्रायः एक दृश्य वा एक तस्वीर चित्रकारी - एक व्यक्ति वा ठाउँमा - शब्दहरू मार्फत शुरू गर्छ। यहाँ न्यूयर्क टाइम्सको एन्ड्रिया इलियटले पलिट्टर पुरस्कार विजेता उदाहरण हो:
"मिश्री पेशेवर कुनै पनि न्यूयर्क स्नातक को लागि पारित गर्न सक्छ।
एक कुरकुरा पोलो शर्टमा लुगा लगाएर कोलोनमा घुमाईयो, उनी न्यान्सन मैक्सिमाको दौडमा मैनहट्टनको बारिश-हल्लाएको सडकको माध्यमबाट लामो श्यामलासँगको मितिको दौडान दौडिएको थियो। रातो रोशनीमा, तिनले आफ्नो कपालसँग डराउँछन्।
बिद्यार्थीले अन्य युवा पुरुषहरु लाई बाहेक अन्य बिचमा बिचरा राख्नु भनेको उनको बिरुद्ध सपिङ हो - एक ठुला, दाँत र दाँतमा एक ठोक्किएको मान्छे र कडा कचौरा टोपी। "
एलियटले कसरी "कुरकुरा पोलो शर्ट" र "वर्षा-ढिलो सडकहरूमा" वाक्यांशहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दछ भनेर याद गर्नुहोस्। पाठक अझैसम्म यो लेखको बारेमा थाहा छैन कि यो लेख बारेमा के हो, तर उनी यी वर्णनत्मक मार्गहरूमार्फत कथामा सारिन्छन्।
Anecdote प्रयोग गर्दै
एक सुविधा सुरु गर्न अर्को तरिका एक कथा वा एकेडेड बताउन हो।
यहाँ एडवर्ड वोंग द्वारा न्यूयर्क टाइम्स 'बीजिंग ब्यूरो को एक उदाहरण छ:
" बीजिंग - समस्याको पहिलो संकेतमा बच्चाको मूत्रमा पाउडर थियो। त्यहाँ त्यहाँ रगत थियो। आमाबाबुले छोरालाई अस्पतालमा लगाउनुभयो, उनीहरूलाई कुनै पनि मूत्र छैन।
डाक्टरहरूले आमाबाबुलाई भने। अस्पतालमा 1 मईको बच्चा मृत्यु भयो, पहिलो लक्षण देखा पर्दा दुई हप्ता पछि। उनको नाम यी काईआयुआन थियो। उहाँ6महिनाको हुनुहुन्थ्यो।
आमाबाबुले सोमबार सोमबार उत्तरपश्चिमी जिल्ला गान्सुमा एक मुकदमा दावी गरेको छ, जहाँ पारिवारिक जीवन छ, Sanlu समूहबाट मुआवजा माग्दै, किआयुआन पेय भएको थियो। यो एक स्पष्ट कटौती मामला जस्तो देखिन्छ; गत महिनादेखि, Sanlu वर्षमा चीनको सबैभन्दा ठूलो दूषित खाद्य संकटको केन्द्रमा रहेको छ। तर दुई वटा अदालतहरूमा सम्बन्धित कानुनी अदालतहरूसँग व्यवहार गर्दा, न्यायाधीशहरूले अहिलेसम्म सुनेका छन्। "
स्टोरी बताउन समय लिइरहन्छ
तपाईले ध्यान दिनुहुनेछ कि एलियट र वोंग दुवैका कथाहरू सुरू गर्न धेरै अनुच्छेदहरू हुन्छन्। त्यो ठीक छ फीचर अखबारहरूमा नेतृत्व गरिन्छ सामान्यतया दृश्य सेट गर्नको लागि दुई देखि चार अनुच्छेदहरू लिन्छन् वा एक पूर्ववर्ती प्रसार गर्न; म्यागजिन लेख धेरै लामो लाग्न सक्छ। तर छिटो छिटो, एक सुविधा कथा पनि बिन्दुमा छ।
Nutgraf जहाँ सुविधा फिचरले पाठकको लागि वास्तवमा कुन कुराको बारेमा सबै कुरा बुझाउँछ भनेर दिन्छ। यो सामान्यतः दृश्य-सेटिङ वा कथालेखको पहिलो केही अनुच्छेद पछ्याउने लेखकले गरेको छ। एक nutgraf एक अनुच्छेद वा थप हुन सक्छ।
यहाँ एलियटको नेतृत्वले फेरि, यो समय nutgraf संग समावेश थिए:
बाईकलमा अन्य जवान पुरुषहरू भन्दा बाहेक अरूले बागलुङको छेउमा बसोबास गरिरहेका छन् - सेतो रङमा र लामो कडा कप्तानमा एक लामो, दाखिला मानिस।
'म प्रार्थना गर्छु कि अल्लाह यो जोडे सँगै ल्याउनेछ,' पुरुष, शीका रेडा शता भन्छिन्, आफ्नो सिट बेल्ट क्लियर गर्दै र बिस्तारै बिस्तारै स्नातक आग्रह गर्दै।
(यहाँ वाक्यको साथ , nutgraf यहाँ छ ): ईसाई एकलहरू कफीको लागि भेट्छन्। जवान यहूदीहरू जेडेट छन्। तर धेरै मुसलमानहरूले विश्वास गर्छन् कि यो अविवाहित पुरुष र महिलाको लागि निजीमा भेट्न मनाइएको छ। मुख्यतया मुस्लिम देशहरूमा, परिचयहरू बनाउने र विवाह गर्ने व्यवस्था पनि आम तौर पर परिवार र साथीहरूको विशाल सञ्जालमा पर्दछ।
ब्रुकलिनमा, श्री शता छ।
हप्ताको हप्ता पछि, मुसलमानले उनको साथ तुरुन्तै मितिहरू लगाउँछन्। कोल-रेटेड मस्जिदको इमेज, शताब्दीमा कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा प्रोफेसरको लागि सुन-टूटीड बिजुलीलाई 550 'वैवाहिक उम्मेदवारहरू' पठाउँछन्। सभाहरू अटलांटिक एवेन्यूमा आफ्नो अफिसमा यमीई रेस्टुरेन्टमा उनको कार्यालयको हरियो वेग सोफेमा वा भोजनमा प्रायः खुलासा गरे। "
त्यसैले अब पाठक जान्दछ - यो ब्रुकलिन इम्याको कथा हो जुन युवा मुस्लिम जोडीले विवाहको लागि एक साथ ल्याउन मद्दत गर्दछ। इलियटले सजिलैसँग कडा-समाचार नेतृत्वको साथ यो कथा लेखेको छ:
"ब्रुकलिनमा आधारित एक इमम भन्छिन् कि उनीहरूले सयौं युवा मुस्लिमहरूलाई विवाहको लागि एकसाथ ल्याउने प्रयासमा सान्त्वनाको रूपमा काम गर्छन्।"
त्यो निश्चित छ छिटो। तर एलियटको वर्णनात्मक, राम्रो तरिकाले तयार पारिएको दृष्टिकोण जस्तो यो रोचक छैन।
जब फीचर दृष्टिकोण प्रयोग गर्ने
कहिले सम्पन्न भएपछि, फीचर नेतृत्वले पढ्नको लागि आनन्द हुन सक्छ। तर सुविधा नेतृत्वले अखबार वा वेबसाइटमा हरेक कथाको लागि उपयुक्त छैन। हार्ड-समाचार नेतृत्वहरू सामान्यतया समाचार तोड्नका लागि प्रयोग गरिन्छ र अधिक महत्त्वपूर्ण, समय-संवेदनशील कथाहरूका लागि। फीचर नेतृत्वहरू सामान्यतया कथाहरूमा प्रयोग गरिन्छ जुन कम म्याद-उन्मुख छन् र ती अझ बढी गहिरो तरिकामा समस्याहरूको जाँच गर्दछ।
एक वनस्पति हुनुहोस् - के एक फोरेस्टर के हो
फ्रिज गरिएका बुलबुले बनाउनुहोस्
एन्जिल रंग: आर्चनका लाइट रे
किन स्वर्गदूतहरूले मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिएनन्?
जल लोकगीत र किंवदंतियों
हुन सक्छ - Antimatter रिएक्टरहरूले काम गर्छन्?
एप्पल कम्प्युटरको इतिहास
वर्षाको बारेमा शीर्ष 10 गीतहरु
गेट GPA, एसएट र एक्टा डेटा
वायु तत्व - धेरै धेरै वा धेरै सानो
सेन्गुको अवधि के थियो?
गौचर कलेज प्रवेश
Absolute Beginner वर्णमाला
तपाईले कहिलेकाहीं क्याट पाइप बारे जान्न चाहानु भएको सबै कुरा
के तपाईं अधिकारको लागि पुरातत्वमा क्या क्यारियर हुनुहुन्छ?
10 राज्य उपनामहरू जो निरपेक्ष मित्र हुन्
राम्रो प्राप्त गर्न प्रेरणात्मक उद्धरण
के मुस्लिम बालबालिकाहरु रमजान को फास्टिङ महिना हेर्छन्?
इन्टरबोर्ड नाउको लागि शीर्ष5अपग्रेडहरू
नेपोलियन युद्ध: बिजुजोजको युद्ध
2013 को शीर्ष 100 पप गीत
चेन कम्पनी: खिलौने, टिन र वेस्टबस्केट